Jereo ny torolàlana momba ny fidirana haingana »University of Hodges
Tongasoa atoandro ny Hawks ho avy!
Tongasoa eto Hodges U! Fantatray fa ny fifidianana ny hanohy ny fianaranao dia fanapahan-kevitra manentana, iray izay feno fanontaniana ihany koa. Miaraka amin'i Hodges U, nasaronay anao izahay.
Ny mpandrindra ny fidirana amin'ny oniversite mahay dia hanampy amin'ny fanampiana anao hamindra ny fangatahanao amin'ny alàlan'ny dingan'ny fidirana. Na liana amin'ny Grady, Undergraduate, ESL, na Certification ianao dia eto izahay hanampy anao hahazo tombony betsaka amin'ny zavatra niainanao tany amin'ny oniversite.
Ny dingana voalohany no sarotra indrindra. Atombohy ny dianao anio.
Fijery haingana an'ireo ekenay Process
Fenoy ny fangatahanao.
Miresaha amin'ny mpanolotsaina anao manokana.
Atolory ny antontan-taratasinao.
Fanekena, orientation ary fisoratana anarana. Akaiky Ianao!
Te hianatra bebe kokoa momba ny dingana tsirairay? Etsy ambany dia hitety anao amin'ny fizotran'ny dingana rehetra izahay.
Topimaso momba ny fidirana
Dingana 1 - Atolory ny fangatahanao
Ny dingana voalohany amin'ny fizotran'ny fidirana dia ny fandefasana ny fangatahanao. Azo atao an-tserasera izany amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fampiharana haingana na amin'ny fitsidihana ny campus anay ao Fort Myers.
Dingana 2 - Mifandraisa amin'ny mpanolo-tsaina anao manokana
Raha mandefa ny fangatahana haingana ataonao an-tserasera ianao dia hifandray aminao amin'ny alàlan'ny telefaona, hafatra, ary / na mailaka ny mpanolotsaina anao manokana raha hanangana fotoana hiresahana ny ho avinao ao Hodges U. Ity dinika ity dia azo atao amin'ny telefaona na any amin'ny campus Fort Myers anay.
Ny tanjon'ny dinika fampidirana dia ny manampy anao hamantatra raha toa ka mety amin'ny fianaranao ambonimbony kokoa ny oniversiten'i Hodges ary hiara-miasa amin'ny fananganana ny làlana manokana ho an'ny fianaranao ao amin'ny Hodges University. Raha vantany vao vita io dingana io, dia hahazo fanasana amin'ny vavahadin'ny vondrom-piarahamoninay izay hamarananao ny fampiharana anao manokana, handefa izay antontan-taratasy mety takiana aminao ary handoavana ny saram-pitsaranao.
Raha mandefa ny fangatahanao mivantana any amin'ny campus ianao, dia azo atambatra ny dingana 1 sy 2.
Dingana 3 - Atolory ny antontan-taratasinao
Ny antontan-taratasy ilaina dia mety miovaova arakaraka ny fandaharam-pizahanao mahaliana, tantaram-pianarana, fomba fandoavam-bola, ary ny maha-olom-pirenena anao Ny mpanolo-tsaina anao hiditra dia hitarika anao amin'ny antontan-taratasy ilaina.
Ny antontan-taratasy ilaina dia mety ahitana:
Taratasy fanampiana fanampiana ara-bola
Aza manahy fa ho eo izahay hanampy anao amin'ny fizotran'ny rakitra. Ataontsika mora araka izay azo atao izany!
Dingana 4 sy ankoatrany - Fanekena sy fisoratana anarana. Akaiky Ianao!
Raha vantany vao nahavita ny fizotran'ny fangatahana ianao dia handray ny fanapahan-kevitrao amin'ny fanekenao ao anatin'ny andro vitsivitsy. Hifandray aminao izahay mba hamaranana ny fisoratana anarana, ary hisoratra anarana amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Hodges U!
Mahereza. Ampiharo Androany.
Fomba fisoratana anarana manokana
Ny programa sasany dia mitaky fizotry ny fisoratana anarana manokana ankoatr'ireo dingana fidirana etsy ambony. Azafady mba jereo ny pejy eto ambany raha mila fampahalalana manokana momba ny programa.
BSN - mpitsabo mpanampy
Ny mpianatra mianatra an-tserasera sy mianatra lavitra dia mety hanangana fitarainana amin'ny alàlan'ny mailaka onlinelearning@hodges.edu. Ireo mpianatra amin'ny fampianarana an-tserasera / fampianarana lavitra izay nahavita ny dingan'ny fitarainana ao amin'ny University of Hodges sy ny fizotran'ny fitarainan'ny fanjakana azo ampiharina dia mety hampiakatra fitarainana tsy ara-dalàna any amin'ny Filan-kevitry ny fandrindrana momba ny fanabeazam-pirenena any Florida (FL-SARA PRDEC). Raha mila fampahalalana fanampiny momba ny fizotry ny fitarainana dia tsidiho ny Dingana fitarainana FL-SARA page.
Ireto politika manaraka azo ampiharina ireto (Zon'ny mpianatra sy ny andraikiny ary Ny politikan'ny fitarainan'ny mpianatra) dia navoaka tao amin'ny Hodges University Handbook izay azo jerena Eto.